Sharif Axmed: Odayaasha Hawiyoow Aniga i doorta! | KEYDMEDIA ONLINE
Sharif Axmed: Odayaasha Hawiyoow Aniga i doorta!
Muqdisho (Keydmedia) – Shariif Axmed ayaa Madaxtooyada Villa Soomaaliya Shir Qarsoodi ah kula yeeshay Odayaasha Beelaha Hawiye oo asagu uu horay u soo Xushay ee ka qeybgalaya Shirka ka socda Magaalada Madaxda Muqdisho.
Kulanku inuu Madaxtooyada ka dhacay habeenkii Xalay wuxuu nagu soo gaaray si Kutiri Kuteen ah waayo looma ogoleen in ey Saxaafadu Goobjoog ka noqoto.
Qolooyinka Ilaalada Madaxtooyada waxey Warbaahinta Keydmedia u sheegeen in ilaa 18 Gaari lagu soo qaaday oo lagu keenay Odayaalka Dhaqanka ee Beelaha Hawiye ayadoo la ogsoonyahay in ayaantaanba Odayaalka Shirku uga socdo Magaalo Madaxda Muqdisho ey Xubnaha Dowladu ku hayeen Faragalin weyn.
Odayaalka laftoodunah ay Dhowjeer ku astakeeyeen Saxaafadda in faragelin Xoog leh lagu haayo oo la doonayo in lakala gato.
Keydmedia.net – Xafiiska Muqdisho